Douglas Costa oo qarka u saran inuu u dhaqaaqo horyaalka Premier League… (Kooxdee ayuu ku sii jeedaa?) – Gool FM
Dajiye September 23, 2020
(Turin) 23 Sebt 2020. Xiddiga reer Brazil iyo kooxda Juventus ee Douglas Costa ayaa qarka u saran inuu u dhaqaaqo horyaalka Premier League, kaddib markii la sheegay inuusan door weyn ku laheyn qorshaha tababaraha cusub ee Bianconeri Andrea Pirlo.
Warbixin lagu daabacay wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa lagu sheegay in Jorge Mendes oo ah wakiilka Douglas Costa uu raadinayo inuu helo koox cusub oo heshiis la gaarta xiddiga reer Brazil, kaasoo u muuqda mid aan sii socon doonin muddo dheer xiriirkiisa naadiga Juventus.
Warbixinta ayaa Jorge Mendes in Mendes uu doonayo inuu heshiis la gaaro Wolverhampton, oo raadineysa baddelka xiddigeedii hore ee Diogo Jota, kaasoo ugu biiray kooxda Liverpool qiimo lacageed dhan 41 million pounds.
Wargeyska “Daily Mail” ayaa sheegay in Juventus ay sidoo kale dooneyso inay raadiso bedelka Douglas Costa ka hor inta aysan u ogolaanin inuu u dhaqaaqo koox kale.
Warbixinta ayaa tilmaamtay in mustaqbalka Douglas Costa ee kooxda Juventus oo uu hogaaminayo Andrea Pirlo uusan caddeyn, maadaama uu ka qeyb qaatay kaliya 8 daqiiqo ciyaartii kooxdiisa ay la ciyaartay Sampdoria furitaanka Horyaalka Talyaaniga.